Women & Wine Gala Night at Katana Japanese Restaurant 759 views
Women & Wine Gala Night at Katana Japanese Restaurant
လွန်ခဲ့သော (၁၃.၃.၂၀၁၅) (သောကြာနေ့ည) တွင် Katana Japanese Restaurant ဆိုင်လေး၌ MyLann မှ Organizer အနေဖြင့် ကျင်းပခဲ့သော Women & Wine Gala Night ပွဲလေးကို အနီရောင်ဝတ်စုံလေးများနှင့်လှပသော အမျိုးသမီးများ၊ အနက်ရောင်ဝတ်စုံများနှင့် အမျိုးသားများနှင့် ပျော်ရွှင်စည်ကားစွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ကြွရောက်လာခဲသော ဧည့်သည်တော်များကို Katana Japanese Restaurant မှ ကောင်းမွန်လှသည့်ဝိုင်များ၊ အရသာရှိလှသည့် ဂျပန်စာများဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပါသည်။ Women & Wine Gala Night ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြသော အနုပညာရှင်များနှင့် ဧည့်သည်တော်များကိုလည်း Katana Japanese Restaurant နှင့် MyLann တို့မှအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Last Friday (13.3.2015), MyLann organizedagreat and delightful event “Women & Wine Gala Night” at Katana Japanese Restaurant in Yangon. Many beautiful ladies dressed up in red and gentlemen in black attended and enjoyed the gala night. Katana Japanese Restaurant treated all the invited guests and media people with delicious Japanese food paired with quality wine. Katana Japanese Restaurant and MyLann gave thank you speeches to all the celebrities and guests who attended this event.